निःशुल्क वकील - वकिल कानुन
निःशुल्क वकील — वकिल कानुन
सुरक्षा को एक कानूनी अधिकार सबैको लागि उपलब्ध छन् संयुक्त राज्य अमेरिका मा, तर यो अक्सर लागत को कानूनी प्रतिनिधित्व देखि मान्छे राख्छ भन्ने प्रचलनमा ती सही छन् । यो प्रकाश मा त्यहाँ हुन सक्छ, केही मदत छन् गर्नेहरूका लागि खोजी कानूनी मदत तर सक्दैन तिर्न खर्च गर्न लागि यो छ । जबकि उपलब्धता र प्रकार को मुक्त वकिल, धेरै भिन्न विचार मा निम्न आफ्नो खोज, तपाईं सामान्यतया हकदार एक सार्वजनिक रक्षक सक्नुहुन्छ भने देखाउन आवश्यक छ । (यो को प्रकार मा निर्भर गर्दछ आपराधिक शुल्क र खुलारूपमा शुल्क निर्धारण गर्न भने तपाईं हकदार छन् वा छैन) — को लागि, नागरिक मामिलामा, निःशुल्क वकिल उपलब्ध हुन सक्छ मार्फत स्थानीय संगठन र समूह काम प्रदान गर्न अदालत मा. संग जाँच स्थानीय पल्ट संगत र कानूनी समूह हेर्न भने यस्तो समूह उपलब्ध छ । को लागि खोज मुक्त वकील आवश्यकता हुन सक्छ केही काम आफ्नो भाग मा, तर सुरक्षा आफ्नो कानुनी अधिकार छ धेरै महत्त्वपूर्ण त छैन परित्याग बिना पहिलो खोजिरहेका सबै आफ्नो विकल्प छ । खोजी गर्दा एक मुक्त वकील, यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ ल्याउन केहि छ कि भन्छिन् कि कानूनी दाबी छ । कुनै पनि कागजात, चिकित्सा रेकर्ड, प्रहरी रिपोर्ट, वा संचार संग, को विरोध पार्टी आवश्यक हुनेछ द्वारा समीक्षा लागि वकील. मुक्त वकील आवश्यकता पूरा निश्चित वित्तीय आवश्यकताहरु काम अघि, तपाईं को लागि ल्याउन आवश्यक जानकारी । यो सुनिश्चित हुनेछ कि आफ्नो मामला मूल्यांकन र सुरु रूपमा चाँडै रूपमा सम्भव छ । मिति, समय, र नाम लागि तयार वकील.
अधिक सटीक तपाईं संग हुन सक्छ आफ्नो विवरण तथ्य, यो राम्रो आफ्नो वकील सेवा गर्न सक्छन् । मुक्त वकिल अक्सर छैन विज्ञापन को सामान्य तरिकामा विज्ञापन । बरु, निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ माध्यम कोर्ट र पोस्टिङ पाउन सकिन्छ स्थानीय वा सरकार एजेंसियों छ । तपाईं प्रयोग गर्नुपर्छ कुनै पनि स्रोतको तपाईं उपलब्ध छ लागि खोजी गर्दा एक मुक्त वकील. सम्पर्क स्थानीय कानूनी संगठन, राज्य पल्ट एसोसिएशन, र कुनै पनि अन्य एजेंसियों मदत गर्न सक्छ कि तपाईं को नेतृत्व गर्न एक मुक्त वकील. इन्टरनेट प्रदान गर्न सक्छन्, जानकारी को एक धन मा सन्दर्भमा कानूनी सेवा उपलब्ध हुन सक्छ कि तपाईं को लागि छ । यस वेबसाइट संग तपाईं प्रदान गर्न सक्छन् एक राम्रो सुरुवात को लागि आफ्नो खोज मा एक मुक्त वकील. प्रयोग खोज समारोह को शीर्ष मा पृष्ठ पाउन र तुलना मुक्त वकिल आफ्नो क्षेत्र मा. जब तपाईं संग भेट्न आफ्नो वकील कि छैन, पक्का तपाईं सबै उपलब्ध कागजातहरू, फाइलहरू, र कागजी आफ्नो मामला सम्बन्धित छ । त्यहाँ छ भने, एक प्रहरी रिपोर्ट, वा कुनै पनि चिकित्सा रेकर्ड संलग्न, यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईं उनलाई ल्याउन आफ्नो वकील, या तपाईं पर्याप्त जानकारी प्रदान भनेर आफ्नो वकील पाउन सक्छन् तिनीहरूलाई र तिनीहरूलाई समीक्षा. तपाईं गर्न आवश्यक जाँदैछन् को एक विस्तृत विवरण दिन सबै कुरा तपाईंलाई थाहा छ, आफ्नो मामला बारेमा. सुनिश्चित तपाईं सही मिति, समय, नाम, र ठाउँमा बैठक अघि आफ्नो वकील संग. तपाईं सहयोग चाहिन्छ भने बैठक आफ्नो वकील संग, तयार गर्न ल्याउन अन्य विश्वासिलो व्यक्तिहरूलाई मदत गर्न तपाईं संग भेट्न आफ्नो वकील. परिवारका सदस्यहरूले अक्सर आफ्नो सबै भन्दा राम्रो स्रोत मा मदतको लागि यस सन्दर्भमा छ । कुनै पनि वकील तपाईं खोजी गर्न आवश्यक हुनेछ स्नातक गरेका एक व्यवस्था स्कूल र पारित पट्टी मा आफ्नो राज्य । जबकि, निःशुल्क वकिल हुन सक्छन् सबै विभिन्न प्रकार को वकिल देखि, महंगा निजी वकिल पूरा समर्थक बोनो आवश्यकताहरु वा सरकारले प्रदान वकिल, तपाईं प्रयास गर्नुपर्छ सुनिश्चित गर्न तपाईं एक वकील छ जो योग्य र तपाईं प्रतिनिधित्व गर्न. वकील गरेको पृष्ठभूमि र अनुभव अघि तिनीहरूलाई अनुमति आफ्नो मामला मा काम गर्न छ । तापनि एक वकिल हुन सक्छ, प्रदान मा कुनै लागत स्वीकार छैन, कुनै पनि प्रतिनिधित्व. आफ्नो वकील हुनुपर्छ क्षमता ठीक फाइल कानूनी कागजातहरू र सल्लाह तपाईं आफ्नो कानूनी अधिकार छ । तपाईं सन्तुष्ट छैनन् भने आफ्नो वकील संग काम, सम्पर्क एजेन्सी वा समूह प्रदान गरिएको छ कि, आफ्नो वकील गर्न प्रयास बाहिर काम गर्न कुनै पनि मुद्दाहरू तपाईं हुन सक्छ.
संग एक सम्बन्ध विकास गर्न आफ्नो वकील
आफ्नो मुक्त वकील हुनेछ तपाईं संग काम गर्न एक लगातार आधारमा र सम्बन्ध हुन सक्छ अन्तिम महिना वा वर्ष को लागि मा निर्भर गर्दछ, आफ्नो मामला छ । यदि तपाईं विश्वास, आफ्नो वकील मा अभिनय एक अव्यवसायिक वा अनैतिक तरिका, सम्पर्क प्रदान अख्तियार आश्वस्त गर्न भनेर आफ्नो अधिकार सुरक्षित छन्, र आफ्नो मामला हराएको छैन कारण आफ्नो वकील गरेको. निस्सन्देह, एक मुक्त वकील प्रदान गरिनेछ लागत बिना आफ्नो ग्राहक । तथापि, उपलब्ध हुनेछ जसले वकिल काम मा आफ्नो मामला को लागत बिना छन्, अन्य विकल्प को प्रकार मा निर्भर गर्दछ मामला । तपाईं छन् भने एक दुर्घटनामा घाइते वा कुनै पनि प्रकार को व्यक्तिगत चोट अवस्थामा, वकील हुनेछ सबैभन्दा अक्सर काम मा एक आधार छ । शुल्क वकील. वकील हुनेछ केवल एक शुल्क सङ्कलन भने तिनीहरूले सफलतापूर्वक जीत र पुरस्कार वा तपाईं ल्याउन एक मौद्रिक बन्दोबस्त छ । यी वकिल हुनेछ सामान्यतया ले गर्न को कुल पुरस्कार रूपमा आफ्नो क्षतिपूर्ति । यो हुन सक्छ एक बहुमूल्य शुल्क संरचना खर्च गर्न सक्दैन गर्नेहरूका लागि महंगा लागत कि कानूनी प्रतिनिधित्व अक्सर आवश्यकता छ । — किनभने निःशुल्क वकिल अक्सर काम गर्नुपर्छ मा धेरै अवस्थामा, एक समय मा सोध्न कति समय तिनीहरूले गर्न सक्षम हुनेछ अर्पण गर्न आफ्नो मामला र कसरी लामो तिनीहरूले मामला आशा गर्न जाने । — सिक्न उपलब्धता को आफ्नो वकील, कसरी उहाँलाई सम्पर्क गर्न वा उनको, र जहाँ तिनीहरूले पूरा गर्न उपलब्ध छन्. तपाईं थाहा गर्न आवश्यक हुनेछ कसरी गर्न तिनीहरूलाई दिन अद्यावधिक मा परिवर्तन मा आफ्नो स्थिति र तिनीहरूले सम्पर्क गर्न आवश्यक हुनेछ तपाईं सल्लाह गर्न मा तपाईं आफ्नो मामला को लागि र आफ्नो निर्णय छ । मुक्त वकील परामर्श उपलब्ध छन् वकिल गर्न इच्छुक छन्, जसले सुरुमा आफ्नो मामला छलफल र सल्लाह तपाईं कसरी लागू हुन्छ । अक्सर समयमा यी मुक्त हुनेछ आफ्नो वकील तपाईं बताउन को कदम चाल्न आवश्यक थप आफ्नो कार्यहरू र कुन प्रकार को कानूनी प्रतिनिधित्व समयमा यी कदम । एक स्वतन्त्र परामर्श सामान्यतया कानूनी कि काम लागि भुक्तानी छ, या त द्वारा प्रतिघण्टा, तला, वा दर. निःशुल्क परामर्श के प्रदान कानूनी सल्लाह; तथापि, तिनीहरूले सामान्यतया केवल बहुमूल्य मा समझ को प्रकार को कानूनी काम गर्न आवश्यक हुनेछ गरेका छन् । मुक्त वकील सेवाहरू फरक मुक्त वकील परामर्श किनभने निःशुल्क वकील सेवाहरू कानुनी प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न खर्च गर्न सक्दैन गर्नेहरूका. मुक्त वकील सेवाहरू मदत गर्न अन्तर्गत-प्रतिनिधित्व, गरिब, र सक्दैन गर्नेहरूका लागि हेरविचार आफूलाई । मुक्त वकील सेवाहरू द्वारा प्रदान गर्न सकिन्छ, यो सरकारले नियुक्त अदालतको, वा द्वारा प्रदान निजी र गैर-मुनाफा समूह । त्यहाँ कुनै गोप्य वकील-ग्राहक सम्बन्ध गठन गरेर प्रयोग नियमहरू वेबसाइट र यस साइट मा प्रदान जानकारी छैन कानूनी सल्लाह. कानूनी सल्लाह लागि, कृपया सम्पर्क आफ्नो वकील. वकीलहरु सूचीबद्ध यो वेबसाइट मा छन् उल्लेख छैन वा समर्थन गरेर यो वेबसाइट. प्रयोग गरेर नियमहरू, तपाईं सहमत नियमहरू
श्रम व्यवस्था छ । बन्ने श्रम वकिल